စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားအထက်တန်းကျောင်းအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းယူနီဖောင်း China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ,သူတော်ကောင်းတရား High School တွင်အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ,ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက် High School တွင်အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရူ့အဝတ်အစား > Sublimated ရူ့စစ်ဝတ်စုံ > စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားအထက်တန်းကျောင်းအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းယူနီဖောင်း
မော်ဒယ်နံပါတ်။: dandy 05
ထုပ်ပိုး: 1 Poly အိတ်၌သတ်မှတ်ထား 1 PCs / စက္ဏူထူနှုန်း 80pcs; စက္ဏူထူအရွယ်အစား: * 37 50 * 31cm
အဆိုပါဆွဲဆန် ့. ပစ္စည်းများကိုအဆင်ပြေလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လုံလောက်သောကိုငါပေးမည်။
1. Matetial: Lycra (အထက်ခန္ဓာကိုယ်) + Organza (အင်္ကျီ) / အခြား + mystique + hologram
2. Rinestones: ပုံမှန်အားဖြင့်အလယ်အရှေ့ rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ကိုသုံးပါ
3. ပင်မဈေးကွက်: အမေရိက, ဥရောပ, အာရှ
လက်ဖြင့် လုပ်. 4. Professinal ခေတ်သစ်ကခုန်စားဆင်ယင်
လုပ် 5.High အရည်အသွေးကိုပစ္စည်းများ
, 7.Noble အံဝင်ခွင်ကျ, Charm နှင့် sexy
ကခုန်အခါသမယများအတွက် 8.Fashion Ballroom ကစားဆင်ယင်ပုံစံဒီဇိုင်း။
9.Usage: Ballroom ကခုန်, ပြိုင်ဆိုင်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်, ကခုန်သင်ခန်းစာများ, ဒါမှမဟုတ်အထူးအခါသမယ။
ရရှိနိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့စိတ်ကြိုက် mockup: အခမဲ့ဒီဇိုင်း
အခမဲ့ပုံနှိပ်: ထုံးစံလိုဂို, နံပါတ်နှင့်အမည်, etc
ဒစ်ဂျစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်: ညှိုးနွမ်းရန်ခက်ခဲကြောင်းကတော့ Vivid စံနမူနာ
ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေး: ဘောလုံး / ရပ်ဂ်ဘီ / ဘောလုံး / ဘတ်စကက်ဘော / ဘေ့စ်ဘော / စက်ဘီးစီးခြင်း
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ 15 နှစ်ထက် 1.More နှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှကခုန်ဝတ်စုံတင်ပို့။
2.Professional ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က R & D ကိုအသင်းနှင့် QC အဖွဲ့က။
3.We တဲ့ professional စက်ရုံမဟုတ်ဘဲကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဆက်ကပ်။
4.We ပေးပို့အချိန်အာမခံ, ကိုယ်ပိုင်ကခုန်အဝတ်အစားစက်ရုံရှိသည်။
အားလုံးကခုန်ဝတ်စုံ၏ 5.Supply မျိုး။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစိတ်ဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမျဉ်း drop 6.Kindly ။ ကျနော်တို့ 24 အလုပ်လုပ်နာရီအတွင်းသင်တစ်ဦးပြန်ကြားချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည်များ '' တုံ့ပြန်ချက်
ကွမ်ကျိုး Dandy အားကစားကုန်ပစ္စည်းများ, Ltd client များ '' လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအားကစားထုတ်လုပ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ရူ့ယူနီဖောင်း, leotards, ဘောလုံးပစ္စည်းများ, ရပ်ဂ်ဘီပစ္စည်းများ, ဘတ်စကက်ဘောပစ္စည်းများ, tracksuit နှင့်အခြားအလေ့အကျင့်အရည်အသွေးမြင့်မားပေမယ့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်ကျော်ကိုငါးနှစ်ကျီထဲကနေအဝတ်တင်ပို့မှုကိုကိုင်တွယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့် client များနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့အစိုင်အခဲထုတ်လုပ်မှု, ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအတူစသည်တို့ကိုထုံးစံဒီဇိုင်းအရောင်, အရွယ်အစားထည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ client များအတွက် OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ရူ့အဝတ်အစား > Sublimated ရူ့စစ်ဝတ်စုံ
လူငယ်သည်တမူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းအချိုးမညီ Neckline ရူ့ Uniform အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအချိုးမညီ Neckline လူငယ်ရူ့ Uniform အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူငယ်သည်အဆိုပါလမ်းပခုံးရူ့ Uniform ဟာ Off custom အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
custom သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်ဒီဇိုင်းကိုအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းယူနီဖောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်ထွန်းလင်းတောက်ပနေသည့် Rhinestone Cheerleading လူငယ်များအတွက်ယူနီဖောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်သူတော်ကောင်းတရားအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ သူတော်ကောင်းတရား High School တွင်အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက် High School တွင်အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ စိတ်ကြိုက်ကလေးများအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ ချစ်စရာကောင်းကွက်သူတော်ကောင်းတရားအားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းစစ်ဝတ်စုံ